"Jehovah hiaro anao amin’ny ratsy rehetra ; eny, hiaro ny fanahinao Izy." Salamo 121:7
"Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko; fa Ianao no ialofan’ny fanahiko; eny, ao amin’ny aloky ny elatrao no ialofako, mandra-pahalasan’ny loza." Salamo 57:1
Teny afovoan’ny ranomasimbe Pasifika, tany Nouvelle-Zélande, dia nanao fanazaran-tena ireto mpilomano za-draharaha. Tsitapitapitrizay dia nisy fesoka (dauphins) marobe nihodinkodina nanodidina azy ireo, nanakaiky tsikelikely mba hanery azy ireo hitangorona. Tamin’izay ny iray tamin’ny mpilomano no nahatsikaritra ery lavitra ery, antsantsa fotsy iray namantana ho eny amin’izy ireo. Efa ho adiny iray ireo fesoka no nanao fehy fiarovana, hanakanany ilay antsantsa tsy hanatona… mandra-pahatongan’ireo mpanao fanatanjahantena rehetra ireo teny an-tanety!
Ry kristiana namana, izany ve tsy mampahatsiaro ny fiarovan’Ilay Andriamanitsika antsika? Hatramin’ny nidiran’ny ota ho amin’izao tontolo izao (Romana 5:12), i Satana dia fahavalo mandehandeha, “mitady izay harapany” (1 Petera 5:8). Fahavalo mahery lavitra sy fetsy lavitra noho isika no atrehintsika. Kanefa naharesy azy teo amin’ny hazofijaliana ny Tompo Jesosy, ary izany dia tokony mba hampirisika antsika hialoka mandrakariva eo anilany. Andriamanitra dia manao fefy manodidina ny olony, manodidina ireo rehetra miankina aminy (Joba 1:9-10). Atsangany ho an’ny tsirairay ilay “fefy manodidina” izay tsy azon’i Satana arodana. Raha mitoetra eo anilan’i Jesosy isika, dia tsy misy antony tokony hampangovitra antsika, manoloana ny fanafihan’ilay Fahavalo. Jesosy mihitsy no manao fifonana ho an’ireo rehetra navotany (Hebreo 7:25). Hoy Izy tamin’i Petera mpianany: “Ry Simona, ry Simona, indro, Satana efa nilofo nitady anareo hokororohiny toy ny vary. Nefa Izaho nangataka ho anao, mba tsy ho levona ny finoanao; ary rehefa mibebaka ianao, dia ampaherezo ireo rahalahinao” (Lioka 22:31-32).